Nguva Yakanaka Yekushanyira Japan
SIM Kadhi vs. Pocket Wifi
Japan nguva izvozvi
Emperor & Mureza
Chiitiko chegore negore
Mamiriro ekunze & Mamiriro ekunze
Kudengenyeka kwenyika & Volcanos
Hupenyu uye Tsika
Zvisikwa zvinotidzidzisa "Mujo"
Tokyo Mamiriro ekunze
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Hokkaido Weather
Nguva yechando Kupfeka muJapan
Nguva yechando Kupfeka muHokkaido
Chitupa Kupfeka muJapan
Zhizha Pfeka muJapan
Autumn Kupfeka muJapan
Kugamuchira Vaeni veJapan
Tsika & Tsika
Chikwata cheJapan Chinotamba
Mifananidzo: Muchato weJapan
Mifananidzo: Bamboo Tsika
Photos: Kuvhenekesa dhizaini muJapan
Photos: Kei mota
Matikiti uye maTV
Zvokudya & Imwai
Temberi uye Shirini
Photos: Inland Gungwa
Hotera uye Ryokan
Shinkansen (Bullet chitima)
Nyowani Chitose Airport
Zvinoshamisa Mwaka, Hupenyu uye Tsika
Dzvanya pane guta, dunhu, kana dunhu kuti uone chinyorwa. Kana iwe usingakwanise kudzvanya pamepu, tapota penya bhatani pazasi uye sarudza iro guta, dunhu kana nzvimbo yaunoda kuona.
Madunhu uye madunhu
ise Nagano Gifu
Mifananidzo: Kiyomizudera Tembere muKyoto
Nzvimbo dzinonyanya kufarirwa dzevashanyi muKyoto iFushimi Inari Shrine Shrine, Kinkakuji Tembere uye Kiyomizudera Tembere. Temberi yeKiyomizudera iri pamateru egomo kumabvazuva kweguta reKyoto, uye maonero kubva kuimba huru, inomira mamita gumi nemasere pakukwirira, inoshamisa. Ngatiendei parwendo rwekuKiyomizudera Tembere! Photos of Kiyomizudera Temple in Kyoto Kiyomizudera Temple in Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera Temple in Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera Temple in Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera Tembere in Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera Temberi in Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera Temple in Kyoto = Shutterstock Temberi Kiyomizudera in Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera Temple in Kyoto = Shutterstock Mepu yeKiyomizudera Tembere [mepu kero = "Kiyomizudera Temple" wide="18%" height="100px" api="AIzaSyDvB353bpqAqs_d87wlvYARF8obRvaO8PEN3" theme =="screet-"screet" class="d" border-mepu dp-mepu-centered" zoom = "4" draggable = "chokwadi" controls = "chokwadi"] Ndinokutendai kuverenga kusvika kumagumo. Dzokera ku "Best of Kyoto"Zvimwe zvakatumirwa: Mifananidzo: Kodaiji Tembere muKyoto Mifananidzo: Nanzenji Tembere muKyoto Mifananidzo: Mashiripiti eRurikoin Tembere muKyoto Mifananidzo: Autumn mavara paTofukuji Tembere, Kyoto Mifananidzo: Daitokuji Tembere muKyoto -Ipasi reZen muHarmony neChisikirwo Kyoto. ! 26 Zvakanakisa Zvakanakisa: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji nezvimwe. Mifananidzo: Eikando Zenrin-ji Tembere -Iye tembere ine mavara akanaka kwazvo ematsutso Mifananidzo: Kyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Mifananidzo: Tsika yeKyoto muMazhizha Mapikicha: Cherry maruva muKyoto Mifananidzo: Kamogawa Rwizi muKyoto Mifananidzo: Autumn mashizha muKyoto
Photos Kuparara kwechando
Mifananidzo: misha yakafukidzwa nechando muJapan
Ndinoda kugoverana newe nezve nharaunda yemisha ine sinou yeJapan. Iyi mifananidzo yeShirakawa-go, Gokayama, Miyama naOuchi-juku. Rimwe zuva, iwe uchanakidzwa nenyika yakachena mumisha iyi! Photos of misha yakafukidzwa nechando = "discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="100" draggable="true" controls="chokwadi"] Gokayama (Toyama Prefecture) Gokayama, Toyama Prefecture Gokayama, Toyama Prefecture Mepu yeGokayama [mepu kero = "Gokayama" width="500%" height="87px" api="AIzaSyDvB8bpqAqs_d8wlvYARF3obRvaO4PEN8" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zo " draggable = "chokwadi" controls = "chokwadi"] Miyama (Kyoto Prefecture) Miyama, Kyoto Prefecture Miyama, Kyoto Prefecture Mepu yeMiyama [map address="Miyama, Kyoto" width="100%" height="500px" api= "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls="chokwadi"] Ouchi-juku (Fu kushima Prefecture) Ouchi-juku, Fukushima Prefecture Ouchi-juku, Fukushima Prefecture Mepu of Ouchi-juku [map address="Ouchijuku, Fukushima" width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlv8ORF3oRF4oRF8o" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="100" draggable="true" controls="chokwadi"] Zvokupfeka kana uchishanyira misha ine chando Ndinoonga uchiverenga kusvika kumagumo. Kudzokera ku "Snow Destinations" Related posts: Mifananidzo: Mt. Fuji yakafukidzwa nechando 500 Nzvimbo Dzakanakisisa dzeSinou muJapan: Shirakawago, Jigokudani, Niseko, Sapporo snow festival ... Mifananidzo: K-mota muJapan Mifananidzo: Sakura- Cherry blossoms in Japan Photos: The Miharu Takizakura -Muti wakanakisa wecherry muJapan! Mifananidzo: San'in -Inyika isinganzwisisike kunogara Japan yechinyakare! Mifananidzo: Nara -Guta guru rekare reJapan Tikugashirei kuJapan! Nakidzwa nemifananidzo yakanaka makumi matanhatu! Photos: Mwaka mina weKamikochi Photos: Odaiba in Tokyo Bay Photos: Hakodate Photos: Ise Jingu Shrine ...
Photos kuHokkaido yaiva
Mifananidzo: Biei naFurano muzhizha
Nzvimbo dzinonyanya kufarirwa dzevashanyi muHokkaido muzhizha ndiBiei neFurano. Nzvimbo idzi, dziri pakati peHokkaido, dzine mapani ane mawere. Maruva ane mavara anotumbuka ipapo. Kuona kushanduka kwezvisikwa pabani iri kunopodza pfungwa dzako. Kana ari Biei naFurano, ndakatonyora zvimwe zvinyorwa. Nekudaro, ini ndoda kusuma runako rwechirimo meadow zvakanyanya, saka ini ndichapfupikisa chimiro chemufananidzo pano. Tapota tarisai kune zvinotevera zvinyorwa pamusoro paBiei naFurano. Yakanaka nyika muzhizha Kubuda kwezuva muBiei, Hokkaido, Japan = Adobestock Maruva akanaka purazi rine mavara chikomo paBiei, Hokkaido, japan = Shutterstock African Marigold, Salvia splendens inotumbuka mumitsetse yemuraraungu mune yakakurumbira uye yakanaka Panoramic Flower Gardens Shikisai-no-oka kuHokkaido . cho, Hokkaido = Adobe Stock Ken & Mary tree, a famous spot in Biei-cho, Hokkaido Japan = Shutterstock Sunflower blossom in Hokusei no Oka Tenbo Park at Hokkaido, Japan = Shutterstock blue pond of bieishirogane town = Shutterstock blue pond of bieishirogane town = AdobeStock Manheru muHokkaido Manheru mamiriro. Biei Hokkaido, Japan = Shutterstock sunset in Biei, Hokkaido, Japan = Shutterstock Pretty sunset in Biei, Hokkaido, Japan = Shutterstock Mepu Biei [map address="Biei, Hokkaido" width="100%" height="300px" api=" AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "discreet" class = "dp-light-border-map dp-map-centered" zoom = "8" draggable = "true" controls = "chokwadi"] Furano [mepu kero = "Fudorano" . ..
Mifananidzo: Geisha (Maiko & Geigi) muGion, Kyoto
Japan ichine "geisha" tsika. Geisha vakadzi vanovaraidza vaenzi vavo nemwoyo wose nemitambo yeJapan nenziyo. Geisha yakasiyana zvachose nedare re "Oiran" raivepo panguva yeEdo. MuKyoto, geisha inonzi "geigi". Mudzidzi wechidiki geisha anonzi "maiko". Munguva pfupi yapfuura, vakadzi vakashandira kambani vanogona kuve geisha. Kare, ndakabvunzurudza geisha kakawanda. Vakadzidza hungwaru uye tsika dzakapfava uye vatsivi vanokosha vetsika dzechivanhu. MuKyoto, zviitiko zvinoitwa muchirimo uye matsutso kwaunogona kuona geisha kutamba. Geisha zvakare inotora chikamu chinoshanda muGion Mutambo muna Chikunguru. Ndapota edza tsika ye geisha! Mapikicha eGion Mapikicha eGion = Shutterstock Mapikicha eGion = Shutterstock Mafoto eGion = Shutterstock Mapikicha eGion = Shutterstock Mafoto eGion = Shutterstock Mafoto eGion = Shutterstock Mafoto eGion = Shutterstock Mafoto eGion = Shutterstock Mifananidzo yeGion = Shutterstock Mepu ye Gion [mepu kero = "Gion, Kyoto" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12 " draggable = "true" controls = "chokwadi"] Ndinotenda iwe uchiverenga kusvika kumagumo. Dzokera ku "Best of Kyoto" Related posts: Photos: Kyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Photos: Traditional Kyoto in Summer Photos: Kodaiji Temple in Kyoto Photos: Cherry blossoms in Kyoto Photos: Kiyomizudera Temple in Kyoto Photos: Kamogawa River in Kyoto Photos: Nanzenji Temple in Kyoto Photos : Mutambo weJidai Matsuri muKyoto Mifananidzo: Kuvhenekera kunoshamisa "Hanatouro" muArashiyama, Kyoto Mifananidzo: ...
Mifananidzo: Kinkakuji vs Ginkakuji -Which ndiyo yaunofarira?
Ndeipi yaunoda zvirinani, Kinkakuji kana Ginkakuji? Papeji rino, regai ndisumire mifananidzo yakanaka yematemberi maviri aya anomiririra Kyoto. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Kinkakuji uye Ginkakuji, ndapota ona zvinyorwa pazasi. Photos of Kinkakuji and Ginkakuji Temple in Kyoto, Japan = Shutterstock Kinkakuji Temple in Kyoto, Japan = Shutterstock Ginkakuji Temple in Kyoto, Japan = Shutterstock Ginkakuji Temple in Kyoto, Japan = Shutterstock Kinkakuji Temple in Kyoto, Japan = Shutterstock Ginkakuji Temberi in Kyoto, Japan = Shutterstock Kinkakuji Temple in Kyoto, Japan = Shutterstock Ginkakuji Temple in Kyoto, Japan = AdobeStock Kinkakuji Temple in Kyoto, Japan = Shutterstock Mepu yeKinkakuji [map address="Kinkakuji" width="100%" height="300px" api= "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12" draggable="true" controls="chokwadi"] Mepu yeGinkakuji [map address="Ginkakuji" wide. = "100%" kureba = "300px" api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "" kirasi = "dp-light-border-mepu dp-map-centered" zoom = "12" inokwevera = "chokwadi" kudzora = "chokwadi" ] Ndinokutendai nekuverenga kusvika kumagumo. Dzokera ku "Best of Kyoto"Zvimwe zvakatumirwa: Mifananidzo: Kodaiji Tembere muKyoto Mifananidzo: Nhoroondo yemakomo makomo muKyoto -Sannei-zaka, Ninei-zaka, nezvimwe. Mifananidzo: Mutambo weJidai Matsuri muKyoto Mifananidzo: Cherry inotumbuka muKyoto Mifananidzo: Kyoto Imperial Palace (Kyoto Mifananidzo: Kifune, Kurama, Ohara muchando -Kufamba uchikomberedza kuchamhembe kweKyoto Kyoto! 26 Zvakanakisa Zvakanakisa: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji etc. Mifananidzo: Nara - Guta rekare reJapan Mifananidzo: Geisha (Maiko & Geigi) muGion, Mifananidzo yeKyoto: Yetsika Kyoto muMazhizha Mapikicha: Misha yakavharwa nechando muJapan Mifananidzo: Koyasan
Hakodate kumaodzanyemba Hokkaido yakafukidzwa nesinou kubva Ndira kusvika Kurume.Hakodate panguva ino yakanaka chaizvo.Hove yegungwa mupunga ndiro pamusika inonzi Asaichi zvakare ndiyo yakanakisa. Ngatitorei rwendo rwechokwadi kuHakodate! Tapota tarisa kuchinyorwa chinotevera kuti uwane mamwe mashoko. Mifananidzo yeHakodate Night view kubva kuMt. Hakodate = Shutterstock Winter inoyevedza kubva kuGomo reHakodate = Shutterstock Mt. Hakodate inoonekwa kubva kuHakodate Port = Shutterstock Guta reHakodate rinoonekwa kubva kumawere eMotomachi = Shutterstock City tram iri kumhanya muguta reHakodate = Shutterstock Hakodate guta in nguva yechando Kanemori Aka Renga Soko muHakodate = Shutterstock Hokodate Morning Market pedyo neHakodate Station Seafood ndiro paHakodate mangwanani musika = Shutterstock Yakanaka yakavhenekerwa Goryokaku = Shutterstock Yakanaka yakavhenekerwa Goryokaku = Shutterstock Kune Gomo rakanaka Komagatake munharaunda yeShutter Hakodate skiing uye snowboarding paOnuma Park munharaunda yeHakodate = Shutterstock Mepu yeHakodate [mepu kero = "Hokodate" wide="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="dp. -border-map dp-map-centered" zoom = "8" draggable = "true" controls = "chokwadi"] Ndinokutendai uchiverengeraend. Back to "Best of Hakodate" Related posts: Hakodate! 7 Zvakanakisa Zvekushanya Zvinokwezva uye Zvinhu zvekuita Photos: Biei naFurano muchirimo Photos:Taushubetsu zambuko muHokkaido Photos: Tomamu muHokkaido Photos: Mabhiza muHokkaido Photos: Masango akanaka muTokachi, Hokkaido Photos: Noboribetsu Onsen -Hokkaido's largest hot spring resort Photos : Yokohama Mapikicha: Koyasan Mifananidzo: Misha yakafukidzwa nechando muJapan Mifananidzo: Yakanaka yeOkinawa ...
Mifananidzo: Tadami Mutsetse muFukushima Prefecture
Kana iwe uchida kunakidzwa neakanaka maJapan maonero ekumaruwa kubva muchitima, ini ndinokurudzira iyo JR Tadami Line kumadokero kweFukushima Prefecture. Mutsetse weTadami unomhanya kubva kuAizu-Wakamatsu, guta rekare kwaunogona kunzwa samurai tsika yeJapan, kuburikidza nemakomo. Photos of Tadami Line JR Tadami Line in Fukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line in Fukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line in Fukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line in Fukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Mutsara muFukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Mutsara muFukushima Prefecture = Pixta JR Tadami Line muFukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line in Fukushima Prefecture = Pixta JR Tadami Line in Fukushima Prefecture = Shutterstock Mepu yeAizu-Wakamatsu [mepu kero = "Aizu-Wakamatsu" width="100%" height="300px " api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "discreet" class = "dp-light-border-map dp-map-centered" zoom = "7" draggable = "chokwadi" controls = "chokwadi"] Ndinokutendai kuverenga kusvika kumagumo . Dzokera ku "Best of Fukushima"Zvimwe zvakatumirwa: Mifananidzo: Ouchijuku Village muFukushima Prefecture Mifananidzo: Hanamiyama Park muFukushima Prefecture Fukushima Prefecture! Zvakanakisa Zvakanakisa uye Zvinhu zvekuita Mifananidzo: Iyo Miharu Takizakura -Muti wakanaka kwazvo wecheri muJapan! Mifananidzo: Ise Jingu Shrine muMie Prefecture Mifananidzo: Kanazawa muIshikawa prefecture Mifananidzo: Motonosumi Shrine muYamaguchi Prefecture Mifananidzo: Gunkanjima Island muNagasaki Prefecture Mifananidzo: Togakushi Shrine muNagano Prefecture Mifananidzo: Biwako Valley muShiga Prefecture Mifananidzo: Takachiho muMiyagaki Prefecture Mifananidzo: Misha yakafukidzwa nesinou muJapan.
Mifananidzo: Beppu (1) Inopenya zvakanaka inopisa chitubu
Beppu, iri kumabvazuva kweKyushu, inzvimbo huru yekuJapan inopisa yekutandarira. Paunoshanyira Beppu, unotanga washamiswa nezvitubu zvinopisa zvinomera pano nepapo. Paunotarisa pamusoro peguta reBeppu kubva pachikomo, sezvauri kuona pane ino peji, utsi huri kukwira kwese kwese. Havasi moto. Husiku, mhepo iyi inopenya uye inopenya zvakanaka. Mifananidzo yeBeppu Mepu yeBeppu [mepu kero = "Beppu, Oita" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map-map-dp centered" zoom="9" draggable="true" controls="chokwadi"] Ndinokutendai nekuverenga kusvika kumagumo. Ndapota ona mamwe mapikicha. Kudzokera ku "Best of Beppu" Nezvangu Bon KUROSAWA Ndave nenguva refu ndichishanda semupepeti mukuru weNihon Keizai Shimbun (NIKKEI) uye parizvino ndinoshanda semunyori akazvimirira wewebhu. KuNIKKEI, ndakanga ndiri mupepeti-mukuru wenhau patsika dzechiJapani. Rega ndizivise zvakawanda zvinonakidza uye zvinonakidza zvinhu pamusoro peJapan. Ndokumbira utarise kuchinyorwa ichi kuti uwane rumwe ruzivo. Related posts: Mifananidzo: Beppu (4) Nakidzwa nezvitubu zvinopisa mumhando dzakasiyana siyana! Beppu! Nakidzwa kuJapan hombe hot spring resort! Mapikicha: Beppu (3) Ngatishanyirei maGehena akasiyana-siyana (Jigoku) Mifananidzo: Beppu (2) Shanduko dzakanaka dzemwaka mina!Mapikicha: Noboribetsu Onsen -Hokkaido's largest hot spring resort Shining Spring and Distant Snow Scene: Kubva pamifananidzo yakanaka gumi! : Hakone -Inokurudzirwa nzvimbo inopisa iri pedyo neTokyo Mifananidzo: Chando paNiseko Ski Resort muHokkaido -Nakirwa nechando chehupfu!
Mifananidzo: Iyo Miharu Takizakura -Yakanakisa cherry muti muJapan!
Dai iwe waizondibvunza kuti ndeipi yakanyanya kunaka cherry blossom muJapan, ndingati Miharu Takizakura muFukushima Prefecture.Muti weMiharu Takizakura une makore anopfuura 1000. Iyi yakanaka cherry muti yakagara yakachengetedzwa uye inodiwa nevanhu veko. Ngatiendei parwendo rwechokwadi kuti titende Miharu Takizakura! Photos of the Miharu Takizakura The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushimastock = The Miharu Takizakura in Fukushimastock Prefecture = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock Mepu of Miharu Takizakura [map Takizakura prefecture = "Map Takizakura" " width = "100%" urefu = "500px" api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "discreet" class = "dp-light-border-mepu dp-map-centered" zoom = "8" inokwevera = "chokwadi" controls "chokwadi"] Ndinokutendai nekuverenga kusvika kumagumo. Dzokera ku "Best of Fukushima" Related posts: Mifananidzo: Hanamiyama Park muFukushima Prefecture Photos: 11 Keywords kuti unakidzwe zvizere neJapan Cherry Blossoms Mifananidzo: Misha yakafukidzwa nechando muJapan Mifananidzo: Mt. Yoshino -30,000 miti yemacherry inotumbuka muchirimo! Mifananidzo: Koyasan Photos: Ise Jingu Shrine in Mie Prefecture Photos: Kanazawa in Ishikawa prefecture Photos: San'in -Inyika isinganzwisisike kunogara Japan yechinyakare! Photos: Biwako Valley in Shiga Prefecture Photos: Shogawa Gorge cruise -River ...
Mifananidzo: Takachiho muMiyagaki Dunhu
Takachiho inyika isinganzwisisike inozivikanwa semusha wengano dzechiJapan. Iri munzvimbo ine makomo yeMiyazaki Prefecture kumabvazuva kweKyushu. Dhorobha richine nzvimbo dzengano nemadhanzi eKagura anoenderana nawo. Iyo inozivikanwawo negungwa rakanaka remakore mumatsutso. Uye inonyanya kufarirwa nzvimbo yevashanyi mutaundi iri Takachiho Gorge. Ngatitorei rwendo rwekuenda kuTakachiho nemifananidzo yakawanda! Photos of Takachiho in Miyagaki Prefecture = Shutterstock Takachiho in Miyagaki Prefecture = ADobeStock Takachiho in Miyagaki Prefecture Takachiho in Miyagaki Prefecture = Shutterstock Takachiho in Miyagaki Prefecture = Shutterstock Takachiho in Miyagaki Prefecture = Miyagaki Prefecture Takahoki Prefecture muMiyagaki Prefecture Mepu ye Takachiho [mepu kero = "Takachiho, Miyazaki Prefecture" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-map-dp-dp-dp -centered" zoom = "9" draggable = "chokwadi" controls = "chokwadi"] Ndinotenda iwe uchiverenga kusvika kumagumo. Back to "Best of Miyazaki" Related posts: Photos: Oze in Gunma Prefecture Photos: Biwako Valley in Shiga Prefecture Photos: Kanazawa in Ishikawa prefecture Photos: Hanamiyama Park in Fukushima Prefecture Photos: Ise Jingu Shrine in Mie Prefecture Photos: Gunkanjima Island in Nagasaki Prefecture Photos: Togakushi Shrine in Nagano Prefecture Photos: Motonosumi Shrine in Yamaguchi Prefecture Photos: Tadami Line in Fukushima Prefecture Photos: Shuri Castle in Okinawa Prefecture Photos: Matsue in Shimane Prefecture Photos: Hikone Castle in Shiga Prefecture
Enda kune Mapikicha
Mharidzo kubva kumhleli:
Ndatenda nekushanyaBest of Japan”! Zita rangu ndiBon Kurosawa uye chinangwa changu ndechokupa ruzivo runobatsira vane tariro vashanyi uye avo vanofarira Japan vanoda. Izvi zvinyorwa, mifananidzo uye vhidhiyo zvichakupa iwe wakasarudzika eJapan. Ndinovimba kuti kuburikidza neBest of Japan”Uchanzwa uchiswededza neJapan uye uine pfungwa iri nani yezvaungatarisira.
Nakidzwa neJapan pane ino saiti!
Iyi saiti inonyatsotariswa kubva kune komputa. Mamwe mavhidhiyo anogona kusatamba kubva kune yako smartphone. Nekudaro, kubva kune yako smartphone iwe uchiri kukwanisa kuwana zvinyorwa zvinokupa iwe ruzivo rwechangobva kuitika kuJapan. Zvekunze zvinongedzo kubva kune ino webhusaiti zvinogona kushandisirwa kwauri kubatsira.
Kune akawanda masosi anounza Japan. Kunyangwe iyi saiti ichangotanga ini ndicharamba ndichienderera nekuvandudza izvo zvirimo nguva nenguva.
Kana iwe uchida kudzidza nezveJapan kana kuda chimwe chinhu chinonakidza kuverenga "Best of Japan”Ndiyo yako yakanaka!
Menyu yenzvimbo ino
Kubva pane ipi peji iwe yaungada kuongorora Japan?
Hupenyu hweJapan uye tsika! rarama mukuwirirana nemasikirwo nevanhu
Kubva pano ndinoda kukuzivisa iwe kuJapan hupenyu netsika. Ini ndinofunga kuti iro kiyi yekunzwisisa hupenyu hweJapan uye tsika ndeye "Harmony". Naizvozvo, ndinoda kupfupisa hupenyu hweJapan netsika kubva pane ino maonero e "kuwirirana" pane ino saiti. "Harmony" iyo yakavakirwa pahupenyu hweJapan uye tsika Ndeupi mufananidzo wauinawo nezve Japan? Kubva kune vamwe vanhu, Japan inoita kunge nyika yakaoma kunzwisisa. Japan inogona kunge iri "Galapagos" neimwe nzira. Mune imwe nyika yechitsuwa kure nekondinendi, hupenyu hwakasiyana uye hunhu hwakagadziriswa. Mushure mekuuya kuJapan, vanhu vazhinji vanoshamiswa nehupenyu netsika dzakagadzirwa seGalapagos. Nepo maguta akakura seTokyo neOsaka achikura, hupfumi hwemwaka mina hunogamuchira vashanyi. Tsika dzakadai senzvimbo tsvene, sumo uye kabuki dzichiripo, asi tsika nyowani senge kuchangamuka, cosplay, marobhoti, nezvimwewo vanozvarwa vachiteedzana. Nyika ine zvinhu zvese zvinopesana zviri symbiotic. Ndiyo Japan. Kana iwe ukabaya mufananidzo uri pazasi, iwe uchaunzwa kune iyo nyika yeJapan isinganzwisisike kuwirirana. Ndakagadzirira mapeji akasiyana siyana, saka ndokumbira ushanyire akawanda mapeji uye unakirwe. Kuwirirana neChisikirwo Kuwirirana Nevanhu Tsika Yemazuva Ano Yakakurudzirwa mavhidhiyo ari kuunza hupenyu hweJapan netsika ndinotenda iwe kuverenga kusvika kumagumo. Kudzokera Kumusha Nezvedu Bon KUROSAWA Ini ndashanda kwenguva refu semupepeti mukuru weNihon Keizai Shimbun (NIKKEI) uye parizvino ndinoshanda semunyori akazvimirira webhu. PaNIKKEI, ndaive ...
Zvakanakisa zvinhu zvekuita muJapan uye maitiro ekugadzirisa
Pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kunakidzwa parwendo rwako kuenda kuJapan. Pakati pavo, ndedzipi mhando dzezvinhu iwe zvaunoda kuti uvake yako yekufamba chirongwa chei? Pane ino peji, ini ndakadoma izvo zvaunogona kunakirwa muJapan. Ndokumbirawo ubaye pamufananidzo wechinhu chaunofarira uye uwane rumwe ruzivo rwakadzama. Ruzivo rwekutanga rwekutengesa matikiti uye kushanya kusazivikanwa mutorwa mushanyi akapfeka kimono, iyo tsika yenyika koshitomu yeJapan ichifamba mutemberi yeSensoji tembere inozivikanwa muTokyo, Japan = shutterstock Usati watsanangura zvaunofanira kunakirwa muJapan, ndapota ziva ruzivo rwekutanga kuita rwendo rwako runoshamisa. Izvo ndezve maitiro ekubhuka akasiyana matikiti uye marwendo. Ndiri kuunza iyi poindi muchinyorwa chinotevera, saka ndokumbirawo upinde mukati kana uchifarira. 20 Zvinhu zvakanakisa zvaunogona kunakidzwa parwendo rwako kuenda kuJapan Zvino, pazasi, ini ndinonyora izvo makumi maviri zvinhu zvandinokurudzira kwauri. Ukabaya pamufananidzo wega wega, unogona kuenda kuchinyorwa chinoenderana. Zvikafu zveJapan Zvitoro zveChando Kwazvinoenda Cherry Maruva Maruva Maruva Vasikana vadiki vechiJapan vanogara pachigadziko chakatsvuka kapeti kuti vaone uye vanakirwe Autumn ane mavara mavara gadheni reJapan kuEnkoji tembere, Kyoto, Japan. Heino Rinzai Zen Chikamu uye chakakurumbira kwazvo munguva yekudonha = shutterstock Autumn Inosiya magadheni eJapan Onsen (Hot Chitubu) Mhuka nehove Kukwira Cosplayer sevanyori muJapan cosplay mutambo .Vatambi vanowanzopindirana kugadzira subculture, uye kushandiswa kwakawanda kweshoko iri " cosplay ", Osaka, Japan = shutterstock Mapaki eVaraidzo uye theme Parks Festivals ...
Kwakanakisisa Vatashanyi Ende muJapan! chando, chirimo, zhizha, nguva yekutanga
Pane ino saiti, ini ndine mapeji ekuzivisa iwo ega munzvimbo dzakasiyana dzeJapan. Unogona kuenda kumapeji nekutarisa menyu uye nekudzvanya pamazita aunofarira. Zvisinei, ndakanyora mapeji aya pazasi. Tarisa zvinotevera uye kana paine peji rezvaunofarira, ndapota tinya pairi uye enda kune iro peji. Nekuti Japan inyika yakakura kwazvo kuchamhembe nekumaodzanyemba, Hokkaido kuchamhembe uye Kyushu neOkinawa kumaodzanyemba zvakasiyana zvakanyanya. Ndinovimba kuti iwe uchawana yako yaunofarira Japan pane yangu saiti. 10 Nzira Dzakanakisa: Ungade kuenda kupi? Kana iwe uchida kutarisa kuti ndedzipi nzvimbo dzekuona nzvimbo dziri muJapan, ndapota verenga rinotevera peji. Nzvimbo Dzakanakisisa paunofamba muJapan Nzvimbo dzakakurumbira muJapan ndedzinotevera. Tarisa pamifananidzo inotsvedza uye tinya pane chero nzvimbo yaunofarira. Izvi zvinotevera zvinyorwa zvinoenderana nedunhu. Hokkaido Yakakurudzira nzvimbo Sapporo Hakodate Furano / Biei Tohoku dunhu (Northeastern chikamu cheHonshu) Nzvimbo dzakakurudzirwa Sendai (Miyagi Prefecture) Towada, Oirase (Aomori Prefecture) Aizuwakamatsu (Fukushima prefecture) Kanto Region (Around Tokyo） Recommended Kana Tokyo Tokyo) (Kanagawa Prefecture) Chubu Dunhu (Central Honshu) Yakakurudzirwa nzvimbo Mt.Fuji (Yamanashi, Shizuoka Prefecture) Shirakawago (Gifu Prefecture) Kanazawa (Ishikawa Prefecture) Kansai dunhu (Around Kyoto ne Osaka) Yakakurudzirwa nzvimbo yeKyoto (Kyoto Prefecture) Nara (Nara Prefecture) ) Osaka (Osaka Prefecture) Chugoku Region (Western Honshu) Yakakurudzirwa nzvimbo Hiroshima (Hiroshima Prefecture) Miyajima (Hiroshima Prefecture) Matsue (Shimane ...
Maitiro Ekuverenga Bhuku Kugara muJapan!
Kune vanhu vane zvakasiyana siyana zvisinganzwisisike zvekubheja. Chaizvoizvo, ndinoda kuenzanisa nzvimbo dzekuchengetedza hotera. Kana ini ndikabhuka hotera, ndinoitarisa nemasaiti mazhinji ekuverenga uye ndoibhuka iyo neyo saiti yandakanyatsogutsikana nezvayo. Kwandiri ine hobby yakadaro, ndinonzwa kuti kune vashanyi vanoshandisa nzvimbo dzekuchengetedza izvo zvandisingagoni kukurudzira zvakawanda. Naizvozvo, ini ndichaunza nezve nzvimbo dzekuchengetedza hotera dzakakurudzirwa munhu wese nekugadzira saiti yakasiyana ne "Best of Japan"kubva zvino zvichienda mberi. Pane peji rino, ini ndichaunza mamwe ekuchengetedza hotera nzvimbo ini ndinokurudzira. Kuti uwane ruzivo nezve pekugara muJapan senge hotera, Ryokan, Minshuku ndapota ona chinyorwa chinotevera .. Dzvanya pamufananidzo wega wega, webhu saiti ichave inoratidzwa pane imwe peji 2 Yakanyanya Kufananidzwa Sites yeRubatsiro Kugara muJapan Pane chaizvo nzvimbo dzakawanda dzaunogona bhuku hotera kana Ryokan muJapan.Zviri kuita hazvibviri kuzviona zvese .. Saka, chinhu chekutanga chandiri kuda kukurudzira ndeye 'nzvimbo dzekufananidza' kwaunogona kuenzanisa zvirongwa zvekugara kwenzvimbo zhinji dzekugara hotera .. TripAdvisor TripAdvisor Kana iwe uchida kuwana pekugara chakakodzera iwe mune rimwe guta seTokyo kana Kyoto, ini ndinokurudzira kuti utange watarisisa muTradAdvisor. saiti ine mukurumbira yekuenzanisa.Isaiti ino ine zvakanakira zviviri.Kutanga, nekushandisa TripAdvisor, unogona kuunganidza ruzivo nezvemahotera akanyanya kuwanda etc muguta rauri kuenda.Chipiri, iwe unogona kuwana zvakachipa chirongwa chekufunga ...
Kufambisa muJapan! Japan Rail Pass, Shinkansen, Airports nezvimwe.
Paunenge uchifamba muJapan unogona kufamba zvakanyatsonaka nekubatanidza shinkansen (Bullet chitima), ndege, bhazi, tekisi, kukwereta mota etc. Kana iwe ukawedzera iyo Shinkansen kukwira kune yako mafambiro, chichava chiyeuchidzo chinofadza. Muchiitiko ichocho, kutenga "Japan Rail Pass" zvingave zvine musoro. Pa peji ino, ini ndichaunza tarisiro yavo. Iri peji rakareba. Kana iwe ukabaya bhatani re "show" mune chimwe nechimwe chinhu, zvakadzama zvakavanzika zvemukati zvinoratidzwa. Ndokumbira utore mukana weiyo tafura yezviri mukati. Iwe unogona kudzokera kumusoro nekudzvanya bhatani bhatani pazasi kurudyi rwe peji rino. Japan Rail Pass Yepamutemo webhusaiti ye "Japan Rail Pass". Dzvanya uye iratidzwe pane peji rakasiyana nekudzvanya mufananidzo ucharatidza mepu iyi pawebhusaiti yepamutemo yeJapan Rail Pass pane rakasiyana peji About Kana iwe uchironga kufamba mukati meJapan uchishandisa JR zvitima senge Shinkansen, ungangoda kutenga "Japan Rail Pass" vasati vaenda. Japan Rail Pass (zvakare inowanzonzi JR Pass) inodhura kwazvo inodarika njanji inopiwa naJR kune vashanyi vekunze. Unogona kuchovha zvakawanda paJR 'Shinkansen uye wenguva dzose expression etc. Mutengo weJapan Rail Pass ndeye, semuenzaniso, 33,000 yen pamunhu (mazuva manomwe, Ordinary mota mhando). KuJapan, zvinotora dzinenge makumi maviri nesere yen yen kuti munhu mumwe adzokere nekudzoka pakati peTokyo neOsaka kuShinkansen. Kana iwe ukashandisa yakawanda yeJR, Japan Rail Pass ichava yako ine simba kwazvo "shamwari". Pazasi pane iyo ...
Zvinyorwa zvinokurudzirwa / Kugadzirira
Rega nditange zvimwe zvinyorwa pane ino saiti.
Kune vanhu vane zvakasiyana siyana zvisinganzwisisike zvekubheja. Chaizvoizvo, ndinoda kuenzanisa nzvimbo dzekuchengetedza hotera. Kana ini ndikabhuka hotera, ndinoitarisa nemasaiti mazhinji ekuverenga uye ndoibhuka iyo neyo saiti yandakanyatsogutsikana nezvayo. Kwandiri ane hunhu hwakadai, ndinonzwa kuti kune vashanyi ...
Maitiro ekuverenga uye kutenga matikiti uye kushanya muJapan! Sumo, baseball, Concert, zvi ...
Kana iwe usingatore chikamu mune rwendo runoshanda neboka rakakura uye uchifamba wakasununguka neshamwari kana mhuri muJapan, unoita sei bhuku nekutenga matikiti emakwikwi emitambo nemakonzati. Kana iwe unonyorera sei kushanya senge zviitiko? Kune nzvimbo dzekuchengetera ...
Paunenge uchifamba muJapan iwe unogona kufamba zvakanyanya zvakanaka nekubatanidza shinkansen (Bullet chitima), ndege, bhazi, tekisi, ngoro dzemotokari etc. Ukawedzera Shinkansen kukwira kune yako yekufamba, ichave ndangariro inofadza. Muchiitiko ichocho, kutenga "Japan Rail Pass" kungave kunonzwisisika. Pane peji rino, ndicha ...
Zvakakurudzirwa zvinyorwa / kwaKupamba
Pane ino saiti, ini ndine mapeji ekuzivisa ega mumativi akasiyana eJapan. Iwe unogona kuenda kumapeji nekutarisa menyu uye kudzvanya pamazita aunofarira. Zvisinei, ini ndakarongedza aya mapeji pazasi. Tarisa uone zvinotevera uye kana paine peji rako ...
Zvakanakisa Zvinhu zvekuita muTokyo: Asakusa, Ginza, Shinjuku, Shibuya, Disney etc.
Tokyo ndiro guta guru reJapan. Ipo tsika yechinyakare ichiripo, hunyanzvi hwezvino. Ndapota huya uye ushanyire Tokyo uye unzwe simba. Pane peji rino, ini ndichaunza nzvimbo dzevashanyi uye kuona nzvimbo zvinonyanya kufarirwa muTokyo. Iri peji rakareba kwazvo. Kana iwe ukaverenga peji rino, ...
Kyoto! 26 Kunakidzwa Kunakidzwa: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji etc.
Kyoto iguta rakanaka rinogara nhaka tsika dzechiJapan. Kana iwe ukaenda kuKyoto, unogona kunakidzwa neJapan tsika yetsika kune izvo zvemoyo wako. Pa peji rino, ini ndichaunza izvo zvevashanyi zvinonyanya kukurudzirwa muKyoto. Iri peji rakareba, asi kana iwe ukaverenga peji ino ku ...
Zvakakurudzirwa zvinyorwa / Kufarira
Pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kufarira parwendo rwako kuenda kuJapan. Pakati pavo, ndezvipi zvinhu zvezvinhu zvaunofunga kuvaka yako kuronga kwekufamba? Pane peji rino, ini ndakaisa izvo zvaunogona kunakidzwa muJapan. Ndokumbirawo ubaye pamufananidzo wechinhu chauri kufarira uye ...
12 Dzakanakisa Kupunzika Kwenyika muJapan: Shirakawago, Jigokudani, Niseko, Sapporo snow festival ...
Pane peji ino, ndinoda kusuma nezve inoshamisa yechando chiitiko muJapan. Kune nzvimbo dzakawanda dzechando muJapan, saka zvakaoma kusarudza iyo yakanakisa Kuparara kwechando. Pane peji rino, ndakapfupisa nzvimbo dzakanakisa, kunyanya munzvimbo dzinozivikanwa pakati pevashanyi vekunze. Ini ndichagovera ...
Best Cherry Blossom Spots uye Mwaka muJapan! Hirosaki castle, Mt.Yoshino ...
Pa peji ino, ini ndichaunza nzvimbo dzekuona nzvimbo nemaruva akanaka echeri. Nekuti vanhu veJapan vanodyara maruva echerry pano neapo, zvakaoma kwazvo kusarudza nzvimbo yakanakisa. Pane ino peji, ini ndinokuzivisa iwe kumatunhu uko vafambi vanobva kune dzimwe nyika vanogona kunakidzwa nemanzwiro eJapan nemaruva echeri. ...
11 ruzivo rwekutanga kuziva musati mafamba muJapan
Izvo zvisikwa zveJapan zvinoratidzika mune ino slide show zvechokwadi zvinopa ruzivo rwakakosha kwauri!
Ndeipi nguva yakanaka yekushanyira Japan?
Ndeipi nguva yakanakisa yegore yekuenda kuJapan? Mhinduro yacho inoenderana nechinangwa chako chekufamba. Zvichida iwe unoda kuona maruva akakurumbira eJapan maruva? Kana zvirizvo, ndinokurudzira kuuya kuJapan mukati memwedzi waKubvumbi. Zvichida iwe unoda kuona akanaka echando nharaunda? Edza kushanyira Hokkaido, Tohoku kana Nagano kubva Ndira kusvika Kukadzi. Kana iwe uchida kunakidzwa nematsutso mashizha, kutenderera Nyamavhuvhu ndiyo yakanyanya kunaka. Kana iwe uchizoona matsutso mashizha muHokkaido, panosvika Gumiguru ndiyo yakanyanya kunaka. Ichi chinyorwa chinojekesa mwaka wega wega zvinhu zvakanaka kwazvo. Chitubu - Kurume, Kubvumbi, Chivabvu: Mwaka wemaruva akanaka Mt. Fuji, Japan = Adobe Stock Nemophila kuHitachi Seaside Park, Ibaraki, Japan Nguva yechirimo muJapan iri mumwedzi waMarch, Kubvumbi naMay. Vhiki nhatu dzekupedzisira dzaKurume uye nemavhiki matatu ekutanga aApril inguva dzakakodzera dzekufamba muChirimo. Vadzidzi vari kupedzisa gore rechikoro uye vakuru vanoshanda vachiri pabasa. Gore rechikoro reJapan rinotanga muna Kubvumbi uye rinopedzisa rinotevera gore munaKurume. Cherry maruva kazhinji anotumbuka mukati memavhiki maviri nguva pakati pegore rechikoro. Zvichienderana nezvamunoenda muJapan, iwe unenge nguva dzose uchikwanisa kuwana Cherry ruva mutambo wekupinda. Mamiriro ekunze echirimo akakosha masikati asi husiku hunogona kunge huri kutonhora Zhizha - Chikumi, Chikunguru, Nyamavhuvhu: Hokkaido nemhemberero dzezhizha dzinokurudzirwa Makara ane maruva uye nedenga rebhuruu muShikisai-no-oka, Biei, Hokkaido, .. .
Mutauro! Zvinhu zvitatu zvekuyeuka kana uchitaura kuvanhu veJapan
Vanhu vazhinji veJapan havana kugona kushandisa Chirungu. Neichi chikonzero, vanhu vanouya kuJapan havagone kutaura zvakanaka nevanhu vechiJapan. Vokune dzimwe nyika dzimwe nguva vanonetseka kuti vangabvunza sei chero munhu rubatsiro kana arasika kana kuda ruzivo. Kana vaenda kutaundi diki kana musha havakwanisi kutaura nevanhu paresitorendi kana kunyange muhotera. MuJapan, Chii chaungaite kuti utaure nevanhu vari muJapan? Ndinokurudzira zvinhu zvitatu zvinotevera. Ngatitii "Sumimasen" Paunotanga kutaura nemunhu wechiJapan wausingazive, unofanira kutanga washandisa mutsara unotevera wechiJapan. "Sumimasen" Izvi zvine chirevo chakafanana ne "Ndiregererei" kana "Ndine urombo (kukunetsa)" muChirungu. MuJapan, mutsara uyu unoshandiswa kazhinji. "Sumimasen" inogona zvakare kushandiswa se "maita basa" kana kushandiswa kukumbira rubatsiro kuchitoro kana kuresitorendi. Uyu mutsara unobatsira kwazvo kana iwe uchida kuita kuti mumwe munhu atarise. Kazhinji, vanhu vanobva kuJapan havana kugona kutaura Chirungu. Nekudaro, kana iwe ukati "Sumimasen" kumunhu wechiJapan vanomira voteerera zvaunotaura. MaJapan vanhu vane mutsa uye vanogamuchira kune vekunze vanhu saka ndokumbirawo unzwe wakasununguka kushandisa "Sumimasen" kana uchida rubatsiro. Usakanganwa kutenda mumwe munhu nekuteerera futi. Usazvidya moyo. Vanhu vechiJapan vanonzwisisa matauriro avanoti “Maita henyu” muchiRungu kuti vanzwisise rutendo rwenyu. Nyora tsamba pabepa MaJapan anonyara, asi kana iwe uri mudambudziko, isu tinokubatsira. = Shutterstock ...
Mari yeJapan Maitiro ekuchinjana mari uye maitiro ekubhadhara
Mari iri muJapan ndiYen. Iri peji rine zvazvino mumitengo yekuchinjana saka ndokumbira utarise pano usati wachinjana mari. Pano iwe zvakare uchawana ruzivo nezve maJapan mabhiri nemari. Uye zvakare, ini ndichatsanangura mamiriro azvino maererano nekushandiswa kwemakadhi echikwereti muJapan. Shanduro yekutsinhana rondedzero: Japan's currecy / USD, nezvimwe. Yakawanda sei 1 yen mumari yenyika yako? Kwayaka: www.exchange-rates.org maJapan emabhangi manotsi uye mari Points Banknotes muJapan = Adobe Stock Kune marudzi mana emabhangi muJapan. Tsamba iwe yaunogona kushandisa yakanyanya inobata kukosha kwe1000 yen. 10,000 yen 5,000 yen 2,000 zviuru yen yen Mari Mari muJapan = Adobe Stock Kune mana marudzi emari muJapan. Tarisira kuti ushandise yen yen zana uye yen yen gumi kazhinji. 1,000 yen 100 yen 10 yen 500 yen 100 yen 50 yen 10 yen Yakakurudzirwa mavhidhiyo ane chekuita nemari yeJapan Kubhadhara muJapan Points Kuchine akawanda zvitoro zvinogamuchira mari chete MuJapan, kune zvitoro zvakawanda zvinogamuchira chete mari. Kune mazhinji mahotera, zvitoro, masupamaketi, zvitoro zviri nyore unogona kushandisa makadhi echikwereti kana uchifamba muguta. Kunyangwe mamwe matekisi auya kuzogamuchira makadhi echikwereti nguva pfupi yadarika. Vazhinji michina yekutengesa iyo inotenga matikiti ezvitima inogona kushandisa makadhi echikwereti. Nekudaro, kana iwe uchibhadhara muripo wekubvuma patembere kana tembere, iwe unofanirwa kuve nemari inowanikwa nyore. Chinjanai mari yenyu kunhandare yendege MuJapan, vashoma vashoma vanogamuchira mari kunze kwemaJapanese yen. Naizvozvo, ...
Yakakurudzirwa nzvimbo dzinobatsira paunenge uchigadzirira rwendo rwako kuenda kuJapan
Pane ino peji, ini ndichaunza akasiyana mawebhusaiti ane hukama neJapan. Ini ndichagadzirisa ruzivo urwu nguva nenguva. Chingave chinhu chinobatsira iwe kuti ushandise kuunganidza ruzivo. Iwo mahotera, zvekufambisa, maresitorendi, uye mawebhusaiti ane hukama epamhepo akapfupikiswa zvakadzama nezvikamu. Sezvo paine zvinongedzo pazasi peji rino, ndapota enda kune peji raunoda kuwona kubva ipapo. Masites anodzidzisa zvakanyanya nezve Japan Japan National Tourism Organisation Japan National Tourism Organisation (JNTO) hwindo rine chekuita nekushanya kwehurumende yeJapan. Iyo yepamutemo webhusaiti yeJNTO ine yakawanda yekuona nzvimbo ruzivo rweJapan. Ruzivo urwu rwuri mumitauro gumi nemashanu. Kana paine njodzi huru muJapan, ino webhusaiti yepamutemo ichapa ruzivo rwakakosha kune vashanyi vekunze. >> Iyo yepamutemo webhusaiti yeJNTO iri pano japan-guide.com japan-guide.com iyi inozivikanwa webhusaiti iyo inoshandiswa nevatorwa vanogara muJapan. Izvo zvishoma nezvishoma yakawedzera huwandu hwayo ezvinyorwa kubvira iyo webhusaiti yakagadzirwa. Zvinogona kutaurwa kuti ndiyo saiti yemashoko evashanyi inozivikanwa kwazvo pakati pevashanyi vanouya kuJapan izvozvi. Muchirimo, inopa ruzivo maererano nekutumbuka kwemaruva echerry muJapan. >> Iyo yepamutemo webhusaiti yeJapan-guide.com iri pano ZEKKEI Japan ZEKKEI Japan inzvimbo yevashanyi ruzivo webhusaiti inoshandiswa nekambani ine hofisi yepamusoro kuGinza, Tokyo. Inopa zvinyorwa zvinoshandisa mifananidzo yakanaka kuzivisa runako rweJapan kuvanhu vekunze. "ZEKKEI" zvinoreva "nzvimbo yakanaka kwazvo" muchiJapan. Kufanana nezvinoreva zita rayo, iri ...
SIM Card vs. Pocket Wi-Fi Rental muJapan! Ndekupi kwekutenga uye kubhadhara?
Munguva yekugara kwako kuJapan, ungangoda kushandisa smartphone. Unowana sei imwe? Pane zvisarudzo zvitanhatu zvinoita. Kutanga, iwe unogona kushandisa kutenderera sevhisi pane yako yazvino chirongwa asi ndokumbira utarise nemubatsiri wako webasa kune mitengo. Chechipiri, unogona kushandisa mahara-Wi-Fi yemahara neyako ikozvino smartphone paunenge uchifamba muJapan. Tevere iwe unogona kunyorera kune yakabhadharwa Wi-Fi service. Iwe unogona zvakare kushandisa yakabhadharwa SIM kadhi iyo inokwanisa kushandira muJapan neako asina kuvhurirwa smartphone. Iwe unogona kushandisa sevhisi yekubatira kubva munyika yako kana Japan kuti utore muhomwe Wi-Fi router, SIM kadhi, kana anokwanisa smartphone. Pakupedzisira, iwe unogona kukwanisa kuhaya foni yakangwara kubva kuhotera yako. Pazasi pane ruzivo pane imwe neimwe yesarudzo idzi kuti ubatsire kusarudza. Ndeipi sarudzo yakanyanya kunaka yekushandisa kwako? Sim kadhi vending muchina kuKansai airport ku Osaka Japan Ruzivo rwakakosha rwekusarudza chishandiso cherwendo rwako rwunotevera. Anodhura-anoshanda Kutenderedza Services Munguva pfupi yapfuura, mabasa ekufamba-famba ayo anogona kushandiswa zvakachipa munyika dzekunze ave kuwedzera. Kana paine zvinodhura zvekufamba-famba kuburikidza nemuridzi wako iye zvino funga kuzvishandisa. Pocket Wi-Fi Routers Kana iwe ukafamba nemhuri yako kana shamwari, zviri nani kushandisa muhomwe Wi-Fi router. Neimwe ye-Wi-Fi router boka rako rinogona kushandisa iyo Internet neanopfuura imwe chete smartphone panguva. Kana iwe uine maviri kana anopfuura maWi-Fi ma-routers zviri nyore kuti iwe urambe uchionana nemumwe kana iwe wakakamurwa ..
Japan nguva izvozvi! Musiyano wenguva kubva kunyika yako
Kune imwe chete nguva yenguva muJapan. Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido, Sendai, Nagano, Hiroshima, Fukuoka, Kumamoto neOkinawa vese panguva imwe chete. Uyezve, sezvo pasina nguva yekuponesa masikati muJapan, hazvina kunyanya kukuomera kuti uzive Japan nguva. Japan ndiyo yave iri pazasi nguva (Kana nguva isina kuratidzwa, isa iyo cursor pachikamu cheJapan chemepu). Ndokumbira utarise nguva iri pamusoro uye tarisa musiyano wenguva nenzvimbo yaunogara. Kana nyika iri refu kumabvazuva nekumadokero, kune akati wandei enzvimbo dzenyika munyika imwechete, pane musiyano wenguva. Nekudaro, Japan haina kureba zvakadaro kumabvazuva nekumadokero. MuJapan, iyo nyika inowedzera yakareba kuchamhembe nekumaodzanyemba, asi kumabvazuva nekumadokero haina kureba zvekuti zvakafanira kuwedzera nguva yenguva kusvika maviri kana anopfuura. Tsuro iri papeji ino inogara pachitsuwa cheOokuno muTakehara Guta, Hiroshima prefecture. Kune vanhu vangangosvika makumi maviri pachitsuwa ichi, asi tsuro mazana manomwe varipo. Mubhuku "Alice's Adventures in Wonderland", tsuro inomhanya nekuchimbidza ichiona wachi muhomwe. Kana iwe ukaenda kuchitsuwa cheOono, unogona kukwanisa kusangana netsuro isinganzwisisike. Ndinoonga iwe uchiverenga kusvika kumagumo. Kudzokera ku "Zvinokosha" Nezvedu Bon KUROSAWA Ndashanda kwenguva refu semupepeti mukuru weNihon Keizai Shimbun (NIKKEI) uye parizvino ndinoshanda semunyori akazvimirira webhu. PaNIKKEI, ...
Mahoridhe muJapan! Vashanyi vanofarira kuzadza muRuva reGoridhe
Kune gumi nematanhatu emaholide emutemo muJapan. Kana zororo rikawira neSvondo, zuva repedyo revhiki (kazhinji Muvhuro) mushure meizvozvo rinenge riri zororo. Mazororo eJapan anonyanya kutarisirwa muvhiki kubva kupera kwaApril kusvika kutanga kwaMay. Vhiki rino rinonzi "Golden Week". Uye zvakare, kune mazuva mazhinji ekuzorora kubva pakati paGunyana kusvika pakupera kwaSeptember kwevhiki. Vhiki rino rinonzi "Svondo reSirivheri". Zororo rechikoro riri kubva pakupera kwaChikunguru kusvika kupera kwaNyamavhuvhu. Ndokumbira utarise kuti panguva dzino dzevashanyi dzakatenderedza nyika dzinozozara. Zuva Idzva Idzva: Ndira 16 Torii gedhi paMeiji Jingu Shrine, Harajuku, Tokyo = Shutterstock Gore Idzva ndiro zororo rakakosha kwazvo kuvanhu veJapan. Vanhu vazhinji vachatora zororo kubva Zvita 1 uye voshandisa nguva nemhuri neMusi weGore Idzva. Vanhu vanoshanyira nzvimbo dzinoera kana matembere kunamatira gore idzva. Kuuya kweZuva reZera: Muvhuro wechipiri waJanuary Vakadzi vechidiki vechiJapan vakapfeka ma kimono ekuuya kwezera, kupemberera gore ravanosvitsa makore makumi maviri = Shutterstock Vakadzi mu kimono kunze kwenzvimbo yetsika panguva yeKuuya kweZera reZuva reKagoshima, Japan = Shutterstock Pazuva rino, maJapan vanopemberera avo vane makore makumi maviri ekuberekwa. Manisiparati mazhinji anopemberera mukukudza kwavo. Vechidiki vanopfeka Kimono kana maSutu uye vanopembera Kuuya kweZera. National Foundation zuva: Kukadzi 29 Ndiro zuva rekupemberera hwaro hweJapan. Zvinoenderana nengano yekare, Emperor Jinmu, mambo wekutanga, ...
Zviitiko zveGore muJapan! Nyowani, Hanami, Obon, Kisimusi uye nezvimwe!
Pachine zvakawanda zvetsika zviitiko zvegore muJapan. Vanhu vazhinji veJapan vanosarudza kupemberera zviitiko izvi zvegore nemhuri dzavo. Munguva pfupi yapfuura, vashanyi vazhinji vekunze vakafadzwa nezviitiko zvakadaro. Kuburikidza nechimwe chezviitiko izvi unogona kuwana zano rakanaka retsika dzechiJapan. Ichi chinyorwa chinotsanangura izvi zviitiko zvegore negore. Zviitiko zveGore Idzva zviitiko zveGore Nyowani ndizvo zvikuru muJapan. Kubva pakupera kwegore zviitiko zvinotevera zvinoitika gore rega. Joya no kane "Joya no kane" chiitiko chegore negore chinoitirwa kuBuddhist temples = Shutterstock "Joya no kane" chiitiko chegore negore chinoitirwa kuBuddhist temples. Pakati pehusiku muna Zvita 31 vapirisita vanoridza mabhero makuru etembere ka108. Iko kunoratidzika kunge kune 108 kushushikana kuvanhu. Izvo zvinoreva kumashure kwekurira kwemabhero ndiko kudzinga iwo manzwiro. Toshi-Koshi soba "Toshi-Koshi soba" ndimi tsika dzinodyiwa musi waZvita 31. MaJapan anodya ma noodles marefu netariro yekuti vachararama hupenyu hwakanaka. Hatsumode Ruzhinji rweHatsumode kuAsakusa muTokyo, Japan. Hatsumode ndiyo yekutanga shinto shinto kana kushanya kwetembere yeBuddhist kweGore Idzva reJapan = Shutterstock "Hatsumode" ndiko kushanya kwekutanga kwegore kunzvimbo yekunamatira kana tembere. Mugore Idzva, tembere imwe neimwe uye tembere zvine vanhu vazhinji vanoshanya. Setsubun "Setsubun" chiitiko chechiJapanese chinyakare = Shutterstock "Setsubun" chiitiko chetsika kudzinga chakaipa. Ichaitwa kutanga kwaFebruary. Vanhu vanokanda bhinzi kumba vachiimba "Oni-wa-soto, fuku-wa-uti," zvichireva "Kunze ...
Mamiriro ekunze neMamiriro ekunze Yegore muJapan! Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido etc.
Paunoronga kushanyira Japan, mamiriro ekunze nemamiriro ekunze zvichave sei? Muchinyorwa chino ndinoda kuzivisa mamiriro ekunze nemamiriro ekunze eJapan uye maficha enzvimbo yega yega. Mamiriro ekunze eJapan akasiyana Japan inzvimbo dzakakwenenzverwa dzinosvika makiromita mazana matatu kuchamhembe nekumaodzanyemba. Inosanganisira zvitsuwa zvina zvikuru uye zvitanhatu zvitanhatu mazana matanhatu. Mamiriro ekunze akasiyana zvakanyanya pakati pekuchamhembe kweHokkaido uye maodzanyemba eOkinawa. Nguva yechando muHokkaido inotonhora zvakanyanya, nepo Okinawa iri nyoro nyangwe munguva yechando. Idzo nzvimbo dzine sinou inorema munguva yechando iJapan Sea divi reHokkaido uye Japan Gungwa divi rekumusoro kweHonshu. Dhata: Japan Meteorological Agency Japan Meteorological Agency Japan Meteorological Agency Japan Mamiriro ekunze Nguva yechando: Chando paJapan Seaside Heavy Snow Snow Kudonha muJapan = Shutterstock Senge musana wezvitsuwa, nharaunda dzemakomo dzakareba dzichimhanya. Nekuda kweiyi nzvimbo yemakomo, mamiriro ekunze ePacific echikamu chezvitsuwa zveJapan uye neJapan Sea divi akasiyana zvakanyanya. Nguva yechando yega yega, kudivi reGungwa reJapan renyika, makore mazhinji akanyorova kubva kuGungwa reJapan anosangana nemakomo. Pano, chando chinowira kazhinji. Zvichakadaro, kudivi rePacific, mamiriro ekunze akajeka anoenderera munguva yechando. Kana iwe ukaenda kunzvimbo dzekumadokero kwegomo renzvimbo munguva yechando, kunyanya Hokkaido nekuchamhembe kweHonshu, iwe unozogona kuona sinou nharaunda. Mwaka wekuJapan wekunaya: Pakati paJune Mukadzi mune chinyakare chiJapan kimono achifamba nenzira inoshambidzwa neyakanaka bhuruu hydrangea (macrophylla) ku ...
Kudengenyeka kwenyika & Makomo muJapan
MuJapan, kudengenyeka kunoitika kazhinji, kubva pakudengenyeka kudiki kusiri kunzwiwa nemuviri kune njodzi huru dzinouraya. Vazhinji veJapan vanonzwa pfungwa yekutambudzika kusaziva kuti njodzi dzinoitika dzoga dzichaitika riinhi. Ehezve, mukana wekusangana chaiko nenjodzi yakakura yechisikigo wakaderera kwazvo. Vazhinji vanhu veJapan vakakwanisa kurarama kuti vave pamusoro pemakore makumi masere. Zvisinei, pfungwa iyi yenhamo ine pesvedzero huru kumweya weJapan. Vanhu havagone kukurira zvisikwa. Vanhu vazhinji veJapan vanofunga kuti zvakakosha kurarama mukuwirirana nemasikirwo. Munyaya ino ini ndichataura nezvekudengenyeka kwenyika nekuchangobva kuitika. Kudengenyeka kwenyika muJapan Kana iwe ukagara muJapan kwemakore mashoma, waizowana imwe diki yekudengenyeka kwenyika iwe pachako. Zvivakwa zveJapan zvakagadzirirwa kusadonha kunyangwe kudengenyeka kukuru kungaitika. Naizvozvo, hapana chikonzero chekutya. Nekudaro, kana iwe ukagara muJapan kwemakumi emakore, pane mukana wekusangana nekudengenyeka kukuru. Muna 80, pakaitika Great Earth Japan Earthquake Huru, ini ndanga ndichigadzira muchengeti muTokyo uye ndakawana chivakwa chichitikiswa nechisimba. East Japan kudengenyeka kukuru njodzi East Japan kudengenyeka kukuru njodzi, Kurume 2011, 11 The Great East Japan Earthquake (Higashi-Nihon Daishinsai) kudengenyeka kukuru kwakarova kuchamhembe kweHonshu musi waKurume 2011, 11. Zvinopfuura 2011% yevanosvika gumi nemazana mashanu vakafa akafa nekuda kwetsunami yakaitika mushure mekudengenyeka. Mushure mekudengenyeka kukuru kweNyika Hanshin kwakaitika muna 90, kuvakwa kwekudengenyeka kwenyika kunoratidza ...
Zvekuita kana iri dutu kana kudengenyeka kuJapan
Kunyangwe muJapan, kukuvara kubva kumatutu uye kunaya kwemvura kuri kuwedzera nekuda kwekudziya kwepasirese. Mukuwedzera, kudengenyeka kunowanzoitika muJapan. Chii chaunofanira kuita kana dutu kana kudengenyeka kwenyika kukaitika iwe uchifamba muJapan? Ehe, iwe haufarire kusangana nemhosva yakadai. Nekudaro, ipfungwa yakanaka kuti uzive zvinyoro-nyoro kana paine emergency. Saka, pane peji ino, ini ndichataura zvekuita kana njodzi yemasikirwo ikaitika muJapan. Kana iwe ukarohwa nedutu kana kudengenyeka kukuru izvozvi, tora iyo hurumende yeJapan app "Matipi ekuchengetedza". Nenzira iyoyo iwe unowana ruzivo rwechangobva kuitika. Zvisinei, ita shuwa kuti une nzvimbo yakachengeteka yekutandarira. Taura nevanhu veJapan vakakukomberedza. Kunyangwe, kazhinji vanhu veJapan havana kunaka pakutaura Chirungu, kana uri mudambudziko ivo vachiri kuda kubatsira. Kana iwe uchigona kushandisa kanji (mavara echiChinese), unogona kutaurirana navo nenzira iyi. Tora ruzivo nezvemamiriro ekunze uye kudengenyeka kweZhizha Typhoon ichirova Okinawa airport = chivharo Terera uone mamiriro ekunze! Ndakaudzwa nevafambi vanobva mhiri kwemakungwa kuti "vanhu veJapan vanofarira mamiriro ekunze." Zvirokwazvo, tinotarisa mamiriro ekunze anenge mazuva ese. Izvi zvinodaro nekuti mamiriro ekunze eJapan anochinja nguva dzese. Japan ine mwaka shanduko pamwe nedutu rinowanzobva zhizha kusvika mukuvhuvhuta. Uyezve, nguva pfupi yadarika, kukuvara kubva kunaya kuchinaya kwakawedzera nekuda kwemhedzisiro yekudziya kwepasirese. Uyezve, kudengenyeka uye kuputika kwemakomo kunoitika muJapan kazhinji. Kana iwe uri kuenda kuJapan, ndicha ...
Emperor yeJapan neJapan Bendera
Paunofamba muJapan unogona kukwanisa kunzwa kunakidzwa kwakadzama dai iwe uine ruzivo rwekutanga nezve nhoroondo yeJapan. Iri peji rinosanganisira chidimbu chipfupi chevakakosha maEmperors munhoroondo yeJapan. Uye zvakare, ini ndichasanganisira ruzivo nezve Japans mureza wenyika. Emperor weJapan View weImperial Palace, Tokyo. Japan = Shutterstock Japan yakashandisa Emperor System kubvira kare. Mambo anonzi "Tenno" muchiJapan. Maererano nengano, mambo wekutanga aive Emperor Jinmu. Zvinonzi Emperor Jinmu akapfekedzwa korona kuma660 BC asi haina chokwadi. Kubudirira pachigaro cheushe kwakaitwa nenhaka kwenguva yakareba. Mubumbiro rekare rakagadzwa muna 1889, Emperor aive akazvimirira. Zvakadaro, muBumbiro idzva rakagadzwa muna 1946, vagari vakapiwa simba rekutonga uye Emperor akazove "mucherechedzo". Nhasi, mhuri yehumambo, inotarisana naMambo, iri kuita basa rekufananidzira. Iri basa rinosanganisira kuenda kumitambo yepamba neyekunze. Mhuri yehumambo inoita "Ippan Sanga" kaviri pagore kukwazisa veruzhinji kuImba yeImperial Palace. Izvi zvinoitika muna Ndira 2 naDecember 23. Panguva ino, vanhu vazhinji vanouya kuImperial Palace kuzobata kuona kwemhuri vari ivo, Vakakurudzira Mavhidhiyo nezve Emperor weJapan Mepanhau yeJapan Mureza weJapan Mureza weJapan unonzi "Hinomaru ". Denderedzwa hombe dzvuku rinodhonzwa pane chena kumashure. Denderedzwa dzvuku rinomiririra zuva rinobuda. MaJapan akanamata zuva ...
Mifananidzo: Mazuva ekunaya muJapan -Rainy mwaka ndiJune, Gunyana naMarch
Mifananidzo: Sensoji Tembere muAsakusa, Tokyo
Mifananidzo: Iyo magic yeRurikoin Tembere muKyoto
Gumiguru muJapan! Autumn mashizha anotanga kubva munzvimbo yegomo!
Mifananidzo: Japan Bamboo Tsika -Arashiyama Bamboo Sango, etc.
Mifananidzo: Daitokuji Tembere muKyoto -Nyika yeZen muHwakabatana neNzvimbo
Mifananidzo: Kodaiji Tembere muKyoto
Ndira kuJapan! Ngatifarirei nguva yechando yeJapan!
Mifananidzo: Hanamiyama Park muFukushima
Zvese Ronga rwendo Nguva yekuenda (16) Chiitiko khalendari (15) Mamiriro ekunze uye Mamiriro ekunze (65) Nzira Dzakanakisa (30) Pokugara (3) Mitikiti uye Kuratidzwa (2) Kudengenyeka (11) Zvipfeko (6) mutauro (1) Mari (1) Musiyano wenguva (1) Indaneti (1) Kubuda (3) Dzidza (83) Hupenyu uye Tsika (71) Nhoroondo (4) Nzvimbo dzakabatana (7)
Nzvimbo dzose Hokkaido (62) Honshu: Tohoku (47) Dunhu reAomori (9) Dunhu reAkita (11) Iwate Dunhu (5) Miyagi Dunhu (5) Yamagata Dunhu (5) Fukushima (8) Honshu: Kanto (81) Tokyo (31) Tokyo Metropolitan (5) Kanagawa Dunhu (8) Chiba Prefecture (4) Saitama Dunhu (3) Dunhu reIbaraki (8) Guta reGunma (6) Tochigi Dunhu (7) Honshu: Chubu (66) Shizuoka Dunhu (6) Yamanashi Dunhu (11) Nagano Dunhu (15) Nigata Dunhu (4) Toyama Dunhu (7) Dunhu reIshikawa (7) Fukui (4) Gifu Dunhu (13) Dunhu reAichi (3) Dunhu reMie (5) Honshu: Kansai (78) Shiga Dunhu (6) Kyoto (33) Dunhu reKyoto (2) Nara Dunhu (6) Wakayama (4) Osaka (7) Osaka Dunhu (4) Hyogo Dunhu (8) Honshu: Chugoku (33) Dunhu reOkayama (6) Hiroshima Dunhu (11) Yamaguchi Prefecture (2) Tottori Dunhu (4) Shimane Dunhu (8) Shikoku (17) Tokushima (5) Guta reKagawa (4) Ehime Dunhu (3) Kochi (1) Kyushu (37) Fukuoka Dunhu (5) Saga Dunhu (1) Nagasaki Dunhu (7) Kumamoto Dunhu (8) Oita Dunhu (8) Dunhu reMiyazaki (3) Kagoshima (3) Dunhu reOkinawa (13)
Kufarira Kwese Mitikiti uye Kuratidzwa (2) Mufashoni (8) Kutenga (14) Zvikafu zveJapan (15) Nzvimbo dzeSinou (77) Cherry Maruva (34) Maruva (32) Mapindu eJapan (16) Autumn Mashizha (54) Onsen (22) Mhuka nehove (10) Kukwira makomo (67) Scenic Rides (29) Paki dzekutandarira (6) Night Views uye Kujekesa (39) Mhemberero (23) Temberi uye Shrines (51) Nhare (33) Nhoroondo Sites (59) Samurai & Ninja (14) Tsika Dzemhizha (5) Mamiziyamu (8) Manga & Anime (7) Mahombekombe (11) Mitambo (14) Indasitiri uye Zvekutengesa (8) Kutakura (12)
Nguva Yose Nguva yechando (52) Zvita (18) Ndira (15) Kukadzi (18) Chitubu (47) Chivabvu (13) Kurume (12) Kubvumbi (17) Zhizha (37) Chikumi (12) Chikunguru (16) Nyamavhuvhu (15) Autumn (47) Gunyana (16) Gumiguru (16) Mbudzi (17)
All Tags Abashiri (1) Aizu-Wakamatsu (2) Akihabara (4) Aomori (3) Arashiya (4) Zooo Zoo (1) Asakusa (3) Ashikaga Ruva Park (3) Aso (5) Beppu (6) Biei (19) Temberi yeChusonji (3) Daisetsuzan (5) Dotonbori (1) Edo-Tokyo Museum (2) Eikando Zenrinji Tembere (4) Enoshima (3) Fuji-Q Makomo (2) Fukuoka (3) Furano (17) Fushimi Inari-taisha Shrine (4) Ginza (3) Ginzan Onsen (4) Gion (1) Hakodate (16) Hakone (4) Hakone Open-Air Museum (1) Hakuba (6) Hasedera Tembere (1) Himeji nhare (4) Hiroshima Peace Chirangaridzo Museum (4) Hitachi Seaside Park (4) Yavana Gumi Bosch (1) Imperial Palace (2) Ise Grand Shrine (2) Ise Shrine (1) Izumo Taisha (5) Jigokudani Snow Monkey Park (3) (1) Kakunodate (5) Kamakura (6) Kamikochi (5) Kanazawa (5) Bindu reKenrokuen (6) Kinkakuji Tembere (4) Kiyomizudera Tembere (7) Kobe (3) Koyasan (4) Kumamoto Castle (2) Kumano Kodo (4) Nyanza Kawaguchiko (2) Matsumoto Castle (4) Meiji-jingu Shrine (4) Miyajima (10) Mt. Fuji (13) Mt. Takao (3) Mt. Yoshino (4) Nabana no Sato (3) Nagasaki (3) Nara Park (4) Nikko (1) Nikko Tosho-gu (4) Niseko (7) Odaiba (2) Oirase rukova (3) Okinawa (9) Osaka Castle (3) Otaru (14) Oze (4) Sakurajima Island (2) Sapporo (22) Sendai (3) Sensoji Tembere (3) Shibuya (2) Shinjuku (4) Shinjuku Gyoen National Bindu (2) Shirakawago (9) Shiretoko (14) Takachiho Gorge (3) Takayama (4) Tateyama Kurobe Alpine Nzira (6) Todaiji Tembere (4) Tokyo Disney (1) Tokyo National Museum (2) Tokyo Skytree (3) Tokyo Tower (3) (1) Umeda (1) USJ (3) Yakushima (2) Yokohama (2) Yufuin (3) Zao (5)
Ndokumbirawo ubaye "Tumira" mushure mekusarudza
Enda ku "mapikicha"
Hokkaido! 21 Nzvimbo Dzakakurumbira dzeVashanyi uye 10 Airport
Hokkaido chitsuwa chechipiri chikuru kuJapan mushure meHonshu. Uye iyo ndiyo nzvimbo yekuchamhembe uye dunhu guru. Hokkaido inotonhora kupfuura zvimwe zvitsuwa zveJapan. Nekuti iyo yekuvandudzwa neJapan yakanonoka, kune yakakura uye yakanaka chimiro muHokkaido. Pa peji rino, ini ndichaunza iyo yeiziso ye ...
Gomo reFuji: nzvimbo gumi neshanu dzekuona muJapan!
Pane peji rino, ini ndinokuratidza iwe hwakanakisa maonero ekuona Mt. Fuji. Gomo Fuji ndiro gomo refu kupfuura muJapan nehurefu hwemamita 3776. Kune nyanza dzakagadzirwa nekuputika kwemabasa kweMt. Fuji, uye kugadzira yakanaka nzvimbo yakatenderedza iyo. Kana uchida kuona ...
Japan Onsen inokurudzirwa zvakanyanya kune vashanyi vekunze
Nekuti Japan inyika ine makomo akawanda akaputika, pasi pevhu panopiswa nehorima yegomo remakomo, Onsen (Hot zvitubu) Zvinobuda pano nepapo. Parizvino, zvinonzi kune nzvimbo dzinopfuura mazana matatu ezviuru muJapan. Pakati pavo, kune nzvimbo dzakawanda dzinozivikanwa pakati pevashanyi vekunze. Pa ...
12 Dzakanakisa Matembere uye Shrines muJapan! Fushimi inari, Kiyomizudera, Todaiji, etc.
Kune nzvimbo dzakawanda netembere muJapan. Kana iwe ukaenda kunzvimbo idzo, iwe zvechokwadi unonzwa kugadzikana uye kuzorodzwa. Kune nzvimbo dzakanaka uye tembere dzaungade kutumira pane yako Instagram. Pane peji rino, rega ndiunze mamwe eanonyanya kufarirwa nzvimbo netembere mu ...
Mwaka weJapan! Tsika yakakurira mukushanduka kwemwaka mina
Pane shanduko yakajeka yemwaka muJapan. Zhizha rinopisa kwazvo, asi kupisa hakugari zvachose. Iko tembiricha zvishoma nezvishoma inodonha uye mashizha pamiti anotendeuka matsvuku uye yero. Pakupedzisira, chando chakaoma chotevera. Vanhu vanodzivirira kutonhora uye vanomirira kuti mvura inodziya isvike. Izvi ...
Copyright © Best of Japan , 2022 Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.